Michael H. Hart: dadkii magaca reebay ee adduunka soo maray Muxamed baa u mudan (No. 1).
Madaxda muslimiinta maanta: qofkii Muxamed (SCW) raaca waa la madax maray.
“Cilmi nimaan lahayn waa la cajabaayaaye”. Sidda Qur’aanka iyo sunnaduba sheegeen Nabi Muxamed (SCW) waxaa yaqaanay Yuhuuddii iyo Kiristaankii joogay intii aan Nabigu (SCW) soo bixin.
Seddexdii qabiil oo Yuhuudda ahaa oo Madiina soo degay maxay usoo degeen? Nabi Muxamed (SCW) bay raadinayeen. Hiriqlihii kiristaanka ahaa iyo Abuu Sufyaan maxaa kala qabsaday markii Hiriqle qiray in Nabi Muxamed uu qabsan doono meeshuu markaas joogay uuna yahay Nabiga soo bixi doona aakhiru samaanka?
Waraqa Binu Noofal soow ma xasuusano. In isagoo Carab ah markii uu bartay Diimihii hore uu ogaaday in uu Muxamed (SCW) yahay Nabigii ugu dambeeyey. Wuxuu Waraqa uu sheegay in Nabiga (SCW) Makkah laga cayrin doono. Nabigu (SCW) markaas ma ogayn laakiin Waraqa waa ogaa.
Risaalo ahaan iska daaye qofkii taariikh ahaan raac-raaca oo caqli leh waa ogaanayaa in Muxamed uu Nabi (SCW) Ilahay ahaa.
Qofkasta oo caqli yar lihi xaqa waa yaqaan. Waxaa Ilaah SWT noogu sheegay Suurat An-Namal in uu Fircoon uu xaqii diiday isagoo ogsoon in ay yiqiin tahay dulmi iyo isa saraysiin darteed.
Hadda Michael Hart ma la yaabteen in uu Muxamed (SCW) halkaas dhigay?
Maxaa Nabi Muxmed (SCW) halkaas geeyey? Ma qabiil iyo tol? Hanti? Kaabo-qabiilnimo? Gabayo iyo suugaan Carbeed? Boqortinimo uu aabayaashi ka dhaxlay? Maya laakiin Qur’aanka iyo Islaamka ayaa halkaas geeyey.
Abuu Jahal wuxuu yiri laftayda iyo tan Nabiga waxaa naga dhexeeyey tartan. Hadday wax xorreeyaan annugana waan xoraynay jirnay, haddii ay martida si foocan u sooraan anniguna waan samayn jirnay, waxaan ahayn sidii fardo isu rahman laakiin hadduu keenay inuu yiraahdo Waxyi baa samada iiga yimaada. Waad aragtaan faraqa u dhaxeeya inuu yahay diintaas Islaamka.
Allaah wuxuu Qur’aanka ku sheegay inuu Nabi Maxamed dadkoo dhan loo soo diray. Inuu yahay Raxmad Caalamka oo dhan loo soo diray. Inuu Allaah yiri akhlaaqdii ugu saraysay baad leedahay.
Caa’isha (RC) markii la waydiiyey akhlaaqda Nabiga (SCW) waxay tiri Qur’aanka ayey ahayd. Waxay ka wadaa sida uu Ilaah ugu sheegay Qur’aanka. Ama Qur’aan soconaya ayuu ahaa.
Akhlaaqdaas Nabiga ayaa furtay Quluubtii Caalamka laga bilaabo “China Ilaa Chile”, Ruushka ilaa Koonfur Afrika.
Xaggay akhlaaqdaasi hadda taalaa?
Ma Makkah mise White house-ka? Ma masaajida mise Mbagathi?
Akhlaaqdaas yaa qaatay? Ma Shiikh baa qaatay mise sharwade?
Abuu Hurayrah (RC) wuxuu dad meel suuq ah joogay ku yiri dhaxalkii Nabiga masaajidkaa lagu qaybinayaa, markaasay masaajidka ku yaaceen iyagoo is leh saami kasoo hela.
Muxuu Michael Hart u aamisanyahay Muxumad (SCW) inuu raad reebay, annaguna inta Masaajida iyo diinta Islaamka ka raad-gadano aan Mbagathi ugu qamaamaynaa?
Qabqablayaashii diide inay wax ka maqlaan shiikh iyo shariif. Waxaa maalmahan la isku haystaa oo la leeyahay dadkii baarlamaanka ku biiri lahaa halaga yareeyo 450.
Qofka shiikha ah hadduu rabo inuu wax ku sheego wuxuu ku bilaabaa “QAALALLAAHU TACAALAA” laakiin bal ergayga Maraykan shirka u jooga oo safaarada Nayroobi ka socda fiiri wuxuu yiri: wuxuu yiri ma jirto cid dad 450 qof ah kharash u haysa, adduunkuna uma dulqaadan karo ee waa in la yareeyaa! Isaga hadal kuma soo celin karaan.
Waxaad mooddaa inay qab-qablayaashu udhaqmayaan sidii ninkii ahaa cadowga Ilahay ee Caamir Binu Dhufayl ee dilay asxaabtii inay Qur’aanka udhigaan loogu diray. Caamir waa ninkii Nabiga ku yiri Nabiyoow xukunka noo qaybi.
Si kastaba arrintu ha ahaatee Caamir waxaa ku dhacay daacuunka geela ku dhaca oo waxaa ka soo baxay nabar wayn oo aad u waynaaday wuxuuna ku dhintay guri haweenay isagoo marti u ah. Markii sakaraadkii hayey buu yiri war ii keena faraskayga ma rabo in guriga haweentaan aan ku dhinto ee waxaan isku dayayaa in aan gurigayga ku dhunto laakiin dhex buu ku dhintay.
Qab-qablayaashu maxay diintooda uga cararayaan oo ay igu qabaan in Islaamku yahay wax cibaada kaliya ku kooban sida Salaada, Soonka, iyo qaybaha kale. Iyo in loo baahdo marka wax la mehersanayo ama wardi la akhirnayo. Laakiin xagga xukunka haddii Islaam la soo hadal qaado afkay qaylo ku shubanayaan. Islaam iyo xukun aa! Xukun iyo xag-jirnimo aa!
Marka miyeysan qabqablayaashu ka baqayn iyagoo meel daran iyo reero muskood jooga oo xal ka raadinaya meel aan Ilaah dhigin oo uun cadowga ummadda kaliya maqla in tii Ilaah u timaado. Ama inta eey ama doofaar xeradaas jooga qaniino ay raabito u dhintaan.
Wallaahi qofka muslimka ah waxay u noqonaysaa qalbi qaboojis mar hadduu arko qab-qablihii oo mar la leeyahay 450 qof saxiix marna cunto loo diidayo, mar meeshuu jiifay laga cayrinayo marna la leeyahay wixii aad saxiixdeen socon waa. Waxaa ka dhici karta in iyagoo xerro jooga oo xukun raadinaya uu xukunkii Ilaahay ku dhaco.
Mushrikii Caamir Binu Dhufayl wuu diiday inuu ku dhinto guri uusan lahayn. Ilaahoow dadka qurbaha jooga ka soo aruuri oo waddankeenii annagoo nabad ah nagu celi.
Qofkii diin ka muuqatoow ka dheeroow meelahaas lagu hayo jees-jeeska iyo ihaanada Diinta. Miyeynaan Carta ku cibro qaadan waatii dad badan oo Diin lagu tuhmayo ay sacabka u garaaceen? Magaalada Carta ceeb ma lahayn oo waa dhul muslim laakiin waxaa ceebta keenay dadka la dooranayey.
Maata dooxyada (qab-qablayaal) shisheeyuhu haku maadaysadeen.
Michael Hart muslim ma ahan, qab-qablayaashuna waa muslum. Micheal Koow buu Muxamed geeyey laakiin halkee qab-qablayaashu Diintii iyo masaajiddii dhigeen?
Waxaan ka soo akhriyey sheekada Michael H. Hart buug yar oo ay soo saartay Islamic Propagation Centre International oo ku taal South Africa. Ninka sheekada isku duway oo tacliiq raaciyey wuxuu ahaa Axmed Diidaat.
Buuga uu qoray Michael Hart wuxuu cinwaankiisu ahaa:
Waa 100-kii qof ee ugu caansanaa ee raadka kaga tagay taariikhda iyo boosaaska uu kala dhigay. Waxaa ku jiray Nabiyo, Saynisyahano, xidigis yaqaano, badmareeno, siyaasiyiin, fiilosoofiyiin, IWM. No.1 wuxuu siiyey Muxamed (SCW).
Buugaas yar dhexdiisa Axmed Diidaat wuxuu ku leeyahay: Michael Hart waa xidigis-yaqaan, xisaabyahan, qareen, saynisyahan, iyo isagoo ku xeel dheer ciyaarta “chess”. Waana nin Kiristaan ah oo Maraykan ah.